हेनान बेन्सेन इन्डक्ट्री कं, लिमिटेड
मोटर वाहन असबाब छाला
कार भुइँ चटाई सामाग्री
कार खुट्टा चटाई
TPE कार भुइँ चटाई
छाला कार खुट्टा चटाई
कार सीट सामान
के म नि: शुल्क नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
हो, नि: शुल्क नमूनाहरु को १ यार्ड उपलब्ध छ, हामी ढुवानी शुल्क संकलन गरिनेछ कि तपाइँको समझ को लागी सराहना गर्दछौं।
के तपाइँ लिंक मा देखाइएको रंग को लागी MOQ छ?
नियमित स्टक उपलब्ध वस्तुहरु को लागी कुनै MOQ छैन, तपाइँ तपाइँको अनुरोधित मात्रा प्रति आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। अनुकूलित रंग सामाग्री को लागी एक 300 गज MOQ हुनेछ।
तपाइँको वितरण समय के हो?
नियमित स्टक वस्तुहरु बाहिर भुक्तानी गरे पछि ३ दिन भित्र बाहिर जहाज। नयाँ उत्पादन को लागी लीड समय ३०% निक्षेप प्राप्त गरे पछि १५-२० दिन हो। अनुकूलित रंग7दिन प्रयोगशाला मिलान र 20 दिन उत्पादन नेतृत्व समय को लागी।
कसरी सिंथेटिक छाला वा कपडाको जीवनकाल छ?
सिंथेटिक छाला को लागी यो पर्यावरण मैत्री degradable सामाग्री हो र यो 3-5 बर्ष को लागी राम्रो स्थिति मा रहन सक्छ जस्तै इन्सुलेशन उच्च तापमान र उच्च आर्द्रता क्षेत्र बाट बाहिर राख्न को लागी। माइक्रोफाइबर छाला को लागी जीवनकाल १० बर्ष भन्दा बढी को लागी रहन सक्छ।
के म तपाइँको सूची पाउन सक्छु?
उत्पादनहरु को एक विस्तृत श्रृंखला को कारण, कृपया हामीलाई तपाइँको सटीक आवश्यकताहरु लाई सूचित गर्नुहोस् ताकि हामी तपाइँको लागी अनुकूलित गर्न सक्छौं।
के हामी छाला मा हाम्रो लोगो वा पशु बनावट हुन सक्छ?
Sure.Please हामीलाई अधिक जानकारी को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्।
हामी कसरी गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं?
सँधै ठूलो उत्पादन भन्दा पहिले एक पूर्व उत्पादन नमूना।
शिपमेन्ट अघि सधैं अन्तिम निरीक्षण।
तपाइँ किन अन्य आपूर्तिकर्ताहरु बाट हामी बाट किन्नु पर्छ?
हामी विकास, निर्माण र पीवीसी/पु/अर्ध पु/बन्डेड छाला/Microfiber छाला मार्केटि specialized मा विशेष गरीरहेका छौं। बाहेक बलियो बजार प्रतिस्पर्धी मूल्य, विभिन्न रंग र फैशनेबल डिजाइन उपलब्ध छन्, र गुणहरु धेरै स्थिर छन्।
मँ लाइनहरु र रंगहरु म तपाइँको वेबसाइट मा चाहान्छु देख्दिन। यसको साथ के गर्ने?
कृपया तपाइँको नमूनाहरु हाम्रो ठेगाना मा पठाउनुहोस्, र तब हामी तदनुसार तपाइँ को लागी विशेष प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो आर एण्ड डी ल्याब अत्यधिक कुशल रसायनज्ञ, रंग विशेषज्ञहरु र उत्पादन विकास टेक्नीशियनहरु जो कस्टम उत्पादनहरु कि तपाइँको सटीक विनिर्देशहरु लाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ संग स्टाफ छ।
तपाइँको कम्पनी को भुक्तानी अवधि के हो?
नयाँ ग्राहक को लागी भुक्तानी अवधि टी/टी 30% निक्षेप र शिपमेन्ट वा एल/सी नजर मा पहिले ब्यालेन्स छ। हामी राम्रो सहयोग मा धेरै आदेश पछि राम्रो भुक्तानी अवधि छलफल गर्न सक्छौं।
ठेगाना: कोठा 912, तल्ला9औं, Lujin भवन, 14 Shangwu waihuan Rd, CBD सम्मेलन केन्द्र, झेंग्झौ क्षेत्र (zhengdong xinqu), हेनान भूखंड मुक्त व्यापार क्षेत्र।
कार भित्री सामाग्री र रंग को बारे मा कुनै प्रश्न, कृपया मलाई सम्पर्क गर्न को लागी नहिचकिचाउनुहोस् र एक पेशेवर टीम तपाइँको लागी काम गरीरहेको छ